Isehlukaniso kubhekwa ngempela esindayo futhi isikhathi ezingemnandi empilweni wanoma yimuphi umuntu, kubantu besifazane kanye amadoda. Uma uthi nhlá, kubonakala sengathi ukuphila ngemva kokwehlukana ukuyeka, kodwa cha, nje kudingeka ncela ke bese uqala impilo entsha futhi bajabule. Ngemva konke kwenziwa - kwenziwe kube ngcono! Yiqiniso, ekuqaleni endlini zonke okusikhumbuza ukuphila esidlule futhi ngomuntu labo oye wahlala isikhathi esithile isikhathi. Umbhede obakhethayo, ndawonye, tv, okuyinto olithole umshado, itafula ikhofi ngenxa okungawo niye ukulwa ukuthengwa - konke okusikhumbuza kuye. Ukulula ngomgwaqo ungabona izindawo lapho ngakho wayevame ukuchitha isikhathi ndawonye, kodwa yokudlela oda umndeni wakho futhi isidlo yendabuko.
Ngakho okokuqala kumelwe balahle izinto ezindala ukuthi kukhona ngakho okusikhumbuza ukuphila esikhathini esidlule, ukulahla ngokuphelele zonke joint akwazi ukugcina, ama-albhamu, izincwadi, izinto, izipho, engalindelekile, zonke izinto ezibangela le nkumbulo kancane. Yenza ukulungiswa in the efulethini, ke uzokusindisa kusukela ukuhlupheka okungadingekile futhi kuzovumela kancane alinake kwabo imisebenzi yasendlini. Misa uya zokudlela evamile nezindawo zokudlela ezinhle ngawe ukuthola futhi ukhethe okunye amathilomu ekhethekile lapho uyozizwa ekhululekile kakhulu. Susa zonke izincwadi khukhwini wakho, futhi uma kudingekile, balahle zonke izinombolo contact.
Yiqiniso, ngokuba abafokazi omunye ngemva kwesehlukaniso abantu ababili nomunye nezingane kahle, uma umkhaya wabo engakakhuli isikhathi sokuzalwa. Futhi uma kukhona, kumelwe kukhunjulwe ukuthi izingane ngesikhathi nokuhlukana kwabazali bazo ababhekene nesimo esinjalo okukhulu kwengqondo. Nemiphumela yesehlukaniso izingane zahlukahlukene kakhulu kungaholela nemiphumela ebuhlungu. Isikhathi sekukaningi iyona kwabazali nezingane zakhe nenkathi yokuqhuma kobusha. Ngakho-ke, njengoba umama nobaba kudingeka banqobe ukwehlukana ngokwabo bese uyazama ndawonye ngomoya ophansi, ngokuphumelelayo futhi ngaphandle ukuthukwa achazele ingane ukuthi kungani abazali bengahlali ndawonye. Futhi, naphezu lokho okwakwenzekile, basamthanda ingane yabo futhi kungenzeka, njengoba esikhathini esidlule ukubona futhi ukuhamba naye kakhulu ngendlela kunesidingo.
Kanjani ukuqala ukuphila okusha ngemva kokwehlukana? Kuwo wonke umlando, wonke amakhulu eminyaka, izazi ukweluleka ugxumela umsebenzi. Yebo, ekuqaleni kunzima kakhulu, ngakho indlela ukugxila nje akunakwenzeka, every little thing kubangela izinyembezi zakho, kodwa ngenxa izinzwa wenza amaphutha amaningi. Futhi lokhu kuyinto evamile, lokhu yinto engokwemvelo, ngemva isikhathi esincane ubuchopho bakho kuphela ngeke kuphela ushintshele ukusebenza. Phela, umsebenzi uye wangisiza njalo ukuba babhekane nokucindezeleka.
Ekuqaleni, ukuphila ngemva kokwehlukana kubonakala babulawa futhi esinzima kakhulu, ngakho-ke kungaba kuhle ukushintsha isimo. Ukuze wenze lokhu, kungcono ukuya nabangane noma umkhaya endaweni ethile ukuze uphumule, vakashela izindawo ezintsha, ukubhukuda olwandle okunosawoti, yokuthamela ilanga, zidlule ezihlukahlukene ezithakazelisayo zezindlela zokuqwala izintaba. Uzothola ukuthi ukuphila akulona grey ngakho, futhi bonke khona emhlabeni ziningi ezingaziwa ezithakazelisayo futhi emuhle.
Yiqiniso, ukuphila ngemva kokuhlukanisa kakhulu ekushintsheni, abaningi bangase babe nomuzwa ukuzibona ngiyisiphukuphuku futhi bakholelwa ukuthi zonke iwayini bayajabula ngokwabo. Ngakho, ngokwesibonelo, owesifazane ukholelwa ukuthi umyeni wakhe washiya kuwo ngenxa yokuthi ukuthi ayiqondakali uzilungiselele, bambalwa abathatha isikhathi kuye, akazange aneliseke embhedeni, akazange abe sibalo elihle mncane.
Khohlwa ngakho! Thanda wena enjalo lokho oyikho, noma kunjalo, ungafaki esiphambanweni. Thatha abangane bakho bese uya esitolo, ukuthenga izinto ezintsha ezinhle, vakashela salon ubuhle, kwekhanda ushintsho. Joyina ejimini, ukufaneleka, pool ebhukuda, ukuthola umsebenzi omusha futhi yokuzilibazisa. Akunakusetshenziswa musa ukuhlala ekhaya adla, ukuxhumana nabangani, wenze ujwayelene nabantu ezintsha futhi esikhathini esizayo esiseduze uzothola mate umphefumulo, ngoba ukuphila ngemva kokwehlukana isiqala nje!
Umuthi 'Artropant "(ukhilimu): Izibuyekezo
Car Ama-alamu "Tomahawk" - izinga okusezingeni eliphezulu!
Ezokuxhumana Modern - okusheshayo
Calcemin Advanced: yokusetshenziswa. izidakamizwa analogue
Indlela hlola sezimoto amaphoyisa izinhlawulo - zonke izinketho
Car Ford Fusion. Izibuyekezo